Zimbabwe High Court: News & Videos about Zimbabwe High Court - CNN.com
Court orders release of alleged coup plotters in Zimbabwe
Zimbabwe judge sues first lady over farmupdated: Wed Feb 04 2009 11:45:00
A Zimbabwe High Court judge is trying to take the country's first lady to court, accusing her of using political muscle to wrest from him a farm he was given during the land seizures.
Zimbabwe court orders police to look for activistupdated: Tue Dec 09 2008 13:48:00
The High Court of Zimbabwe has ordered police to make efforts to search for human rights activist Jestina Mukoko, who was allegedly abducted from her home a week ago, a human rights lawyer said Tuesday.
Zimbabwe opposition party calls for activists' releaseupdated: Tue Nov 25 2008 13:47:00
Lawyers for Zimbabwe's main opposition party have petitioned the attorney general for the urgent release of 15 activists arrested a month ago, the party said Tuesday.
Zimbabwe judge rejects decision to ban opposition rallyupdated: Sat Jun 21 2008 11:47:00
A judge in Zimbabwe's High Court overturned Saturday a police ban on an opposition rally scheduled for Sunday -- less than a week from the presidential runoff -- a lawyer for the opposition told CNN.
Zimbabwe opposition fail in legal bidupdated: Mon Apr 14 2008 10:51:00
Zimbabwe election ruling 'delayed to Monday'updated: Thu Apr 10 2008 03:40:00
Zimbabwe's High Court will wait until Monday to issue its ruling on whether it will order the Electoral Commission to release the March 29 presidential results, a journalist at the courtroom told CNN. Dozens of white-owned farms reported seized in Zimbabweupdated: Tue Apr 08 2008 14:50:00
Zimbabwe militants, mostly war veterans, have forcibly seized at least 60 white-owned farms, apparently on government orders, a farmers' representative said Tuesday.
No results for Zimbabweupdated: Tue Apr 08 2008 14:50:00
Zimbabwe election officials accused of undercounting votes. CNN's Jim Clancy reports.
Zimbabwe court could force release of election resultsupdated: Mon Apr 07 2008 20:06:00
Zimbabwe's High Court ruled Monday it can force the country's electoral commission to release the results of the March 29 presidential election, but it is still unclear if the court will do so.
Zimbabwe election fraud fearsupdated: Mon Apr 07 2008 20:06:00
Opposition vows Zimbabwe election won't be stolen, CNN's Nkepile Mabuse reports.
Inside Zimbabweupdated: Mon Apr 07 2008 20:06:00
A CNN correspondent offers a rare look inside Zimbabwe as voters grow ever more frustrated awaiting election results.
High court clears Tsvangirai of treasonupdated: Fri Oct 15 2004 04:46:00
Zimbabwe's High Court has acquitted opposition leader Morgan Tsvangirai of charges he conspired to have President Robert Mugabe assassinated.